AXMED SHEEKH JAAMAC – dhugasho
maxamedsheekafguun Oktoobar 13, 2021 suugaanta
Hordhaca uu abwaanku gabaygan u sameeyey wuxuu ahaa sidan:
Gabaygan waxaan tiriyey 1979kii. Anagoo dad gaadha ah ilaa 150 oo ka shaqeeya Xisbigii Urara Bulshada ayaa waxaa nala geeyey Qoryooley si aanu usoo tirino qaxootiga jooga ee Soomaali Aboo, Soomaali Galbeed iyo NFD.
Dhawr iyo labaatan guddi ayaa naloo qaybshay. Makhribkii oo ay qoraxdu sii liiqayso iyadoo shaqada badankeedii noo dhamaatay gudigayagii ayaa waxaa arkay gabadh aan is idhi waa ilaa 17 ilaa 19 jir inta u dhaxaysa, markeedii horena qurux u dhalatay laakiin markaa basaasaysan oo arad ka muuqdo, oo wakhtigaa maqribka ah lagu soo wado guddiga, oo qolyo Guulwade ahi dhabarka kasoo riixayaan, iyaduna ay cagajiid tahay.
Waxaan is idhi waxay ka gebangaabsanaysaa kaalay risaaqadaadaa la qorayaaye, hala tiriyee. Markii habaynkii lasoo guuraynayey oo Xamar lagu soo socday oo basaska la fuushanaa yaa la yidhi Axmadow gabay. Marka ilaa galabtii ayaan waxoogaa isku duduway. Waxaan idhi waxaan la hadlayaa gabadhaa aan galabta arkay. Anigu markaa gabadha magaceeda ma aqoonin laakiin Qaali baan isaga baxshay. Waxaan idhi markaa gabadhii anoo la hadlaya:
Mar unbaad qaxootiga ka bixi, Qaaliyey bariye
Ragbaa kuu qisaasane yaree, qurubka laabtaada.